Hevitra ao amin'ny Cronicare, ny fanampiana voajanahary izay mikarakara ny alikanao | Tontolo alika
Mitady izay tsara indrindra ho an'ny biby fiompinay foana izahay. Sady amin'ny lafiny fampiononana ary fikarakarana sakafo sy fahasalamana. Noho izany, tsy afaka manadino safidy hafa toa isika Cronicare, satria ankoatry ny fananana tombontsoa marobe, iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia ny vokatra izay voajanahary 100% ary miaraka amin'izany dia efa manana vaovao tsara isika.
Raha voajanahary izany dia efa fantatsika fa afaka manolotra azy amin'ny biby amin'ny fomba azo antoka isika. Fa angamba misy fanontaniana maro hafa tianao hapetraka amin'ny tenanao momba ny Cronicare ary mazava ho azy, faly izahay manome azy ireo. Fantaro hoe inona izany ary rahoviana isika no tokony hanome azy ireo biby fiompintsika malalantsika.
1 Inona no atao hoe Cronicare
2 Inona no atao hoe Cronicare
3 Alika iza no tokony handray Cronicare
4 Ahoana ny fakana Cronicare
4.1 Kaontenera 30 ml an'ny Cronicare
4.2 Kaontenera 100 ml an'ny Cronicare
4.3 Takelaka Cronicare
5 Contraindications Cronicare
6 Miasa ve i Cronicare?
7 Aiza no hividianana Cronicare ho an'ny alika mora vidy
Inona no atao hoe Cronicare
Izy io dia vokatra iray izay misy fitambarana voajanahary tanteraka. Noho izany, adinontsika ireo fanampim-bola be loatra satria tsy hitondra na iray aza amin'izany. Ankoatr'izay dia tsy maintsy lazaina fa vahaolana am-bava izay tonga amin'ny endrika kely sy anaty ranoka, ahafahana mitantana azy noho ny dispenser.
Raha tianao dia manana safidy takelaka koa ianao. Azontsika atao foana ny manitsy ny vola miankina amin'ny biby fiompintsika. Fa raha manontany tena ianao hoe inona ny akora ao anatiny, izay fanontaniana hafa tianay ho fantatra dia holazainay aminao izany Izy io dia manana firafitry ny fitrandrahana rongony ary koa menaka trondro izay manolotra ny Omega 3 ilaina, ankoatry ny asidra matavy EPA sy DHA izay manatsara ny fahasalaman'ny kardia. Eny, efa nolazainay ny nalaina rongony izay ara-dalàna tanteraka hitantanana.
Ankehitriny rehefa fantatsika ny fomba fanolorana azy sy ny akora manana azy, lojika raha tianao ho fantatra hoe inona izany. Ity fanampiana ity dia vokatra mahavelona tsara ho an'ny biby fiompinay. Indrindra rehefa misy fanaintainana maharitra na fitaintainanana na aretina sasany toy ny aretin-tratra ary koa ny aretin-torimaso na epilepsy. Izy rehetra sy ny maro hafa, azonao atao ny mifehy azy ireo amin'ny fomba mandaitra, satria Cronicare dia raisina ho anti-inflammatoire ary koa antioxidant. Tsy adino fa hanome azy ireo otrikaina sy proteinina na mineraly marobe koa izy ireo. Ka raha misy olana na aretina voalaza ny biby fiompinao dia efa fantatrao fa manana an'io vokatra voajanahary io ianao tena akaiky hanampy azy ireo.
Alika iza no tokony handray Cronicare
Marina fa tokony hifampidinika foana amin'ny mpitsabo biby anao. SAINGY raha tsikaritrareo fa ny biby fiompinao dia miady saina kokoa noho ny mahazatra na efa voan'ny aretina sasany noho ny fahanteranyFotoana izao handosirana ary hanandrana an'i Cronicare.
Izy io dia voalaza ho an'ireo alika olon-dehibe rehetra izay efa manana fahasarotana sasany amin'izany. Na dia tsy voahilika aza fa amin'ny taona hafa, ity vokatra ity dia azo ampiasaina ihany koa mba hamahana ny aretina sasany. Rehefa misy mamaivay ao amin'ny vatana na misy aza fikorontanana amin'ny torimaso, dia ho lavorary i Cronicare hampiala voly anao ary hanomboka hahatsapa ho tsara kokoa.
Ahoana ny fakana Cronicare
Hofoanantsika ireo karazana fampisehoana Cronicare isan-karazany, mba hahafantaranao ny fomba hitantanana azy amin'ny fomba tsara:
Kaontenera 30 ml an'ny Cronicare
Ity fitoeran-javatra ity dia manana dispenser dropper. Noho izany, ny habetsany farany ambany dia iray monja isaky ny kilao ny lanjany ary indray mandeha isan'andro. Io no fomba tsara indrindra hanombohana fitsaboana. Azonao atao ny mampitombo ny fatra amin'ny antonony ary amin'ity tranga ity dia mety ho indray mitete iray kilao fa indroa isan'andro. Ary farany, amin'ny tranga sarotra kokoa dia azonao omena azy roa isaky ny kilao ary indroa isan'andro.
Kaontenera 100 ml an'ny Cronicare
Amin'ity tranga ity, ny kaontenera 100 ml dia misy syringe 1 ml ho an'ny fitantanana. Manomboka amin'ny kely indrindra natolotry ny 0,3 ml isaky ny lanja 10 kilao ary indray mandeha isan'andro. Ny salan'isa antonony rehefa mitohy ny olana dia mitovy amin'ny etsy ambony ihany fa indroa isan'andro. Raha ny fatra avo indrindra azonao omena ny alikanao dia 0,6 ml isaky ny lanjan'ny 10 kilao ary indroa isan'andro.
Na dia mora kokoa aza ny manome doka misy azy ireo, ny marina dia manana fampisehoana amin'ny endrika takelaka ihany koa ianao. Be tokoa ho an'ny alika sy saka latsaky ny 5 kilao dia takatrao 1/4 fotsiny no azonao omena azy ireo. Ny alika izay efa milanja 5 ka hatramin'ny 10 kilao dia milanja tapany takelaka isan'andro, raha 11 ka hatramin'ny 20 kilao kosa ny lanjany 1 takelaka. Raha milanja mihoatra ny 21 kilao na akaiky ny 30 ny alikanao dia takelaka 1,5 isan'andro no ho fatra azy. Ary farany, izay milanja mihoatra ny 30 kilao dia afaka mandray takelaka roa isan'andro.
Miezaha tsy hahazoana antoka fa akaiky loatra ny fatra ary noho izany, tsara kokoa ny miloka amin'ny fanomezana ilay voalohany amin'ny sakafo maraina sy ny faharoa, raha ilaina, amin'ny sakafo hariva.
Na dia voajanahary 100% aza dia marina fa tsy tokony hihoatra ny fatra isika. Noho izany dia tsara kokoa hatrany ny manaraka ny torolalana ary rehefa miahiahy ianao dia anontanio indray ilay mpitsabo anay.
Na dia misy mitrandraka rongony aza, Tokony hazavaina fa manana isan-jato ambany indrindra THC izy. Inona no mahatonga ny rafitry ny biby fiompintsika tsy hahafantatra azy?. Noho izany dia tsy maintsy milamina isika satria tsy hisy vokany psychoactive an'ny rongony. Noho izany, amin'ny maha-famenony feno proteinina sy vitamina ary mineraly azy, dia tsy ekena ho fanoherana izany. Na dia tsy maintsy ampidirintsika amin'ny fatra ambany aza izany mba hahitana raha misy fihetsiky ny biby fiompintsika.
Miasa ve i Cronicare?
Isaky ny manandrana vokatra vaovao isika dia tonga ao amintsika ny fisalasalana. Izahay dia mitady fampahalalana amin'ny Internet, hevitra mety ho mpitari-dalana ary izany no antony nanaovako izany koa. Fa ny alikako, efa antitra, dia nanaintaina mafy izay naseho rehefa nandeha sy tamin'ny endrika malemy. Ny fijeriny sy ny fahantrany koa dia nanosika ahy hanandrana an'i Cronicare. Miaraka am-pitandremana kely ary manaraka foana ny fatra hotaterina dia mitsambikina isika ary eny, tokony holazaiko fa tena mety izany.
Ny olona antitra volo dia matetika tratry ny aretina isan-karazany. Ny sasany mora mifehy kokoa, fa rehefa milamina ny fiainany dia mijanona tsy hitovy. Noho io antony io dia torotoro ny fanahintsika rehefa hitantsika fa tsy nitovy tamin'ny taloha ny kalitaon'ny fiainany. Eny, tsy maintsy manome toky anao aho fa hatramin'ny nanombohany ny fitsaboana an'i Cronicare dia tena lehibe ny anjarany. Ankehitriny dia mahatsapa ho toy ny mandeha ianao ary nandao azy ny malemy. Noho izany, ny fanaintainana koa miaraka aminy. Azoko lazaina fa nateraka indray ny kalitaon'ny fiainany ary, na dia mitovy taona aminy aza izy izao, dia manararaotra tsara kokoa isan'andro sy manana fanahy tsara kokoa.
Aiza no hividianana Cronicare ho an'ny alika mora vidy
Raha te hividy Cronicare mora vidy ianao dia efa fantatrao fa afaka mitodika any Amazon ianao. Io no hatsarana amin'ny tranonkala misy ny karazana vokatra rehetra. Any ianao dia hankafy endrika isan-karazany, vidiny isan-karazany fa ny fanafody tsara indrindra foana ho an'ny biby fiompinao. Marina fa afaka mankany amin'ireo magazain'ny biby fiompy fanta-daza ianao, toy ny fivarotana biby fiompy izay ahitanao vidiny mifaninana ihany koa. Ankehitriny tsy manana fialantsiny ianao amin'ny tsy fanomezana ny tsara indrindra ny biby fiompinao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Chronicare